मेलम्चीमा बेपत्ताको खोजी गर्न परिचालित सशस्त्रको गोताखोरको डुंगा पल्टियो
४. ५ दिन देखी भोकालाई भोजन गराउँदै युट्युब पत्रकारहरु (भिडियो)
५. १८ औ दिन देखी भोकालाई भोजन गराउँदै युट्युब पत्रकारहरु, घुम्ती सेवा समेत शुरु (भिडियो)
बिहिबार, साउन ०१, २०७७ मा प्रकाशित
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ड्याम फु’ट्दा बे’पत्ता भएका चालकलाई सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली सवार र्‍याफ्टिङ बोट दु’र्घटना भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोलीको डुंगा प’ल्टिँदा चार जना अधिकारी घा’इते भएका छन् ।
बोट पल्टिएपछि नदीमा परेका मध्ये ५ जनालाई बाहिर निकालिएको र २ जना नदीमा बोटमा रहेकाले निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै एक जना प्रहरी सामान्य घा’इते भएका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परेर पछिल्लो एक सातामा १८ जना बेपत्ता छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीतालाई भारतीय राजकुमारलाई नभई नेपालकै अयोध्याका राजकुमार रामलाई दिइएको हो, भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै यतिबेला नयाँ वि’वाद मात्र सुरु भएको छैन, यसले राम भूमि अयोध्याको बिषयमा समेत थप अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ ।
यसैबीचमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ स्थित ठोरी भन्सार टोलदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फ रहेको सुमेरु पर्वतमा सीताको गुफा तथा केही प्राचीन अ’वशे’षहरु भेटिएका छन् । ठोरी भन्सार टोल नजिकैबाट बगेको ठुटे खोलासँगै जोडिएको ठूल्ठूला चट्टानसहितको सुमेरु पर्वतको बीच भागमा सीताको प्राचीन गुफा भेटिएको हो ।
गुफासँगै सीताले त्यहाँ तपस्या गर्ने क्रममा विताएका दिनहरुको बखत रहेका कुण्ड, प्राचीन घडा, प्राचीन शिवलिं’ग लगायतका अ’वशे’षहरु भेटिएका हुन् । माता सीता जनकपुरबाट पर्साको ठोरीमा आएर त्यही गुफामा रही तपस्या गर्ने गरेकी र सोही क्रममा पूजा गर्नका लागि ढुँगाको ठूलो चट्टानमा आफैले बनाएकी शिवलिं’गको अ’वशे’ष भेटिएको हो ।
उक्त शिवलिं’गको बीचको भाग फुटेर हराइसकेको अवस्थामा छ, भने त्यही नदी छेउमै सुमेरु पर्वतको तल्लो भागमा भगवान राम तथा सीताले पिउने गरेको पानीको कुण्डको अ’वशे’ष अहिलेसम्म सुरक्षित नै रहेको छ । यसो झट्ट हेर्दा सानो खाल्टो जस्तो देखिएपनि चट्टानै चट्टानले बनेको करिब १० फिट गहिरो र दुई मिटर गोलोका आकारको कुण्ड अहिले पनि त्यही छ ।
उक्त कुण्डमा कुनै पनि महिनामा पानी नसुक्ने गरेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । उक्त कुण्डको साथमा खोला वरिपरि ठूल्ठूला चट्टानले बनेको विभिन्न भगवानको मुर्तिहरुको अ’वशे’ष पनि रहेको छ । उक्त अ’वशे’षहरुबाट पनि भगवान रामको जन्मभूमि पर्साको ठोरी नै भएको त्यहाँका स्थानीयहरुको भनाइ छ ।